Record Computer ihuenyo na kọmputa na ihuenyo teepu
> Resource> Record> The Right Way idekọ Videos nke Computer ihuenyo
Mgbe i nwere nsogbu nke na-arụ ọrụ ọhụrụ ngwa ma ọ bụ usoro, na enweghị echiche nke otú na-akọwa ihe mere na kọmputa gị, i nwere ike mkpa a ngwá ọrụ idekọ kọmputa ihuenyo, na-ezite ya na kọmputa guru ma ọ bụ a oru nkwado Ihọd maka enyemaka. Ọ chọrọ iji gosi kpọmkwem ihe i mere na kọmputa gị na otú a mere, otú ahụ ọrụaka ọrụ nwere ike ịghọta ị ka mma na-enye gị ngwa ngwa ngwọta n'ime nkeji. Na nke ahụ, ị ​​chọrọ ka ịdekọ gị onscreen ọrụ dị ka a video faịlụ.
N'oge ahụ, a na ihuenyo edekọ dị ka DemoCreator bụ ihe dị gị mkpa n'ezie. Na ya, ị nwere ike mfe idekọ kọmputa gị na ihuenyo na yiri niile nke gị arụmọrụ na dị nnọọ 3 nzọụkwụ. N'ebe a, anyị ga-ahụ otú idekọ kọmputa ihuenyo na nke a dị ike ma dị mfe na-eji software.
1 Mee elu na ndekọ nhọrọ na ina malitere
Mgbe na-agba ọsọ DemoCreator, pịa New Record. Wee họrọ gị ndekọ ebe site na-adọkpụpụta na-akpụ akpụ na green rektangulu. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbanwe ka ihuenyo zuru ndekọ mode dị ka gị mkpa.
Ọzọ, setịpụrụ ndekọ mode. E nwere 3 nhọrọ maka gị:
Full Motion: ịdekọ niile na mgbanwe na ihuenyo.
Nseta ihuenyo: weghara na ihuenyo ọrụ dabere na òké clicks na keystrokes.
Manual: na-screenshots site na ịpị F7 mgbe ndekọ.
Mgbe esi n'ezie, na-amalite gị na ndekọ na pịa F10 ịkwụsị ya mgbe gị na ndekọ bụ n'elu.
2 Dezie gị ndekọ slides (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ị chọrọ, tinye akomako, annotations, ihe oyiyi, interactivities na ọbụna animations ime ka ndekọ ihe doro anya na mmekọrịta. Ka ihe atụ, i nwere ike tinye Tinye Flash Animation site na ịpị Flash button ma họrọ Flash na-aga aga na menu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mesie ụfọdụ dị mkpa ọdịnaya, na-agbakwunye Zoom mmetụta dị mkpa. Ime ya, na-aga Home taabụ wee pịa Zoom button, ị ga-ahụ a red etiti ebe nke a ga-ebupụtara na. Ọzọ, hazie ọnọdụ, na ọnụ ọgụgụ na oge nke ahọrọ mbugharị eku.
3 Asuanetop dị ka usoro-amasị gị
Nke a software enye serveral mmepụta formats maka gị. Ị nwere ike ma na-ebipụta na ihuenyo ndekọ dị ka a video nke dị iche iche format gụnyere SWF, AVI, MP4, MOV, wdg ma ọ bụ Email ya ọrụaka ọrụ ozugbo. Niile ị oke!
Mma ịghọta nzọụkwụ n'elu, ị nwere ike ele nke a video ngosi kere site DemoCreator. Pịa Full ihuenyo icon na play mmanya na-ele video na ihuenyo zuru oke.
Ị na-ahụ, ọ dị mfe ka ịdekọ kọmputa ihuenyo na DemoCreator. Ugbu a na-agbalị ya site onwe gị!